Wararkii ugu dambeeyay Shirka ka socda Madaxtoyada Somaliya & Qodobbo laga doodayo – HalQaran.com
Muqdsiho (Halqaran.com) – Iyadoo Maalintii labaad uu ka socda Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya Shir u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo, Madaxda Dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ayaa Isniinta maanta ah ka duwan sidii shalay.
Kulanka Maanta ayaa waxaa Madaxda shireysa dhex maraya doodo xasaasi ah, iyada oo aad loo falan qeeynayo qodobbadii kasoo baxay Shirkii Dhuusamareeb3 oo Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay diideen.
Wararka ay helayso Warbaahinta Halqaran.com ayaa sheegaya, in Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay dalbadeen in qodobada qaar ee shirkii Dhuusamareeb3 wax ka bedel lagu sameeyo, sida arrimaha la xiriira, doorashayooyinka oo awood siinaya Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka.
Madaxda Maamul goboleedyada ayaa waxa ay doonayaan in la sameeyo Guddi kale oo heer dowlad goboleed iyo heer Federaal ah.
Sidoo kale, qodobbada ay Madaxda Puntland iyo Jubbaland soo jeediyaan in wax laga bedelo ayaa waxaa kamid ah, tirada ergooyinka wax dooraneysa oo horay heshiiskii Dhuusamareeb3 u ahaa 306 Ergo halka ay dalbadeen in laga dhigo 101 ama 150 Ergo.
Waxaa kale ka mid ah qodobbada, deegaannada ay ka dhacayaan doorashooyinka Baarlamaanka.
Si kastaba, Qodobbadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb3 ayaa waxa ay dhigayaan in Dowlad Goboleed walba ilaa Afar deegaan ay ka dhacaan doorashooyinka.
Madaxda ku shireysa Villa Soomaaliya ayaa la filayaa in weli ay sii wadan doodda la xiriirta arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ilaa ay kasoo saaraan shirkooda go’aan rasmi ah oo ay ku wada heshiiyeen dhinacyada wadahadlaya.
Tags: doorashada deegaanada, qodobbada shirka la isku mari la'yahay, Shirka socda Madaxtooyada